Marmụ nwoke Marías. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Ikpeazụ Dove | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Marmụ nwoke Marías Ikpeazụ Mee wepụtara akwụkwọ ọhụrụ ya nke akpọrọ Ikpeazụ nduru. Carmen Salinas, onye na-esote ụmụ nwoke, sitere na Granada ma nweela mmeri Carmen Martín Gaite Novel Prize na 2017 na mbido ya, Pukata, azụ na azụ. Ana m ekele gị nke ukwuu oge na nlebara anya raara nye nye m ajụjụ ọnụ a ebe ọ na-agwa anyị banyere ọrụ ọhụụ a na karịa obere obere.
Marmụ nwoke Marías - Ajụjụ ọnụ
AKW LKWỌ AKWURKWỌ: The nduru ikpeazu obu akwukwo ohuru gi. Kedu ihe ị gwara anyị maka ya na ebe echiche a siri?
MEN MARÍAS: Andalusia ọ bụ mgbe niile ka ọ malitere. Mkpa ọ kpughere ya. Ọ bụkwa na Andalusia dị ka ezigbo ndị ogbu mmadụ: ọ dịghị onye ga-enyo ya enyo. Nye pụrụ ịtụkwasị obi n’ìhè ahụ? Ọ bụ onyinyo ahụ na-atụ anyị ụjọ. Ma n’azụ nghọta doro anya dị otú ahụ, akụkọ dị egwu dị egwu. Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị. Ezoro nke ọma. Kedu ọbịbịa nke ndị America na Rota na 50s.
Rota, obodo furu efu na ndịda Spain nke nwere naanị okporo ụzọ anọ site na ịnyịnya ibu ndị ịnyịnya ibu jupụtara, ebe mmiri si n'olulu mmiri na enweghị ọkụ eletrik, nabatara mbata nke United States nke America na mkpa nke ụgbọ mmiri ahụ. , Rolling Stones, Coca-Cola na Mickey Mouse. Ndị America rutere ka ọnwa ole na ole gachara n’oké osimiri ahụ na-eji ego ha juru n’akpa na njikere ịga oriri na nkwari. Ihe niile bụ ìhè, agba, egwu ... na efu. Mụ nwanyị na-apụ n'anya kwa ụbọchị na ọ dịghị onye nyocha ya. Otu n’ime ha bụ Inés, nwa agbọghọ ahụ Diana na-achọ taa. Mana nchọta a abụrụla nkụda mmụọ n'ihi na Diana apụtala n'ihu ọdụ ụgbọ mmiri a na-emerụ emerụ ma nwee nnukwu nku na azụ ya.
M: Anaghị m ekwu eziokwu n’akwụkwọ mbụ m gụrụ. Ana m echeta nke mbụ metụtara m n'ezie: Nke a bụ okwu Zarathustra, na Nietzsche, nke m gbabara n'ime afọ iri na otu ma ọ bụ iri na abụọ. Akuko mbu ee, n'ezie. Echere m na m na-ede otu akụkọ ahụ na ndụ m niile: nke nwanyị na-enweghị ike ịchọta ọnọdụ ya n'ụwa.
M: Onye isi edemede m bu Dostoyevsky, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, mana enwere ọtụtụ ndị ọzọ m ga-eme ka ọ pụta ìhè: Camus, Max Aub, Clarín, Lorca, Pessoa, Thoreau, Zweig ... Banyere ebe edemede ugbu a, Victor nke Osisi ọ bụ nke abụọ na nke abụọ.
M: Ana Ozores, na Regenta, site na akwụkwọ ọgụgụ a na-akpọ otu aha. Ọ dị m ka ọ bụ otu n'ime ihe odide na-adọrọ adọrọ na akụkọ ihe mere eme na enwere m obi ụtọ na ọ si Spain.
M: Ebe a ga-adị ọcha ma dịkwa ọcha. Anaghị m arụ ọrụ n’etiti ndị mmadụ, M na-egbochi, m na-echeghị nke ọma.
M: La abali, obi abụọ adịghị ya. Onwere ihe na abali nke bu ulo ndi mmuo. Na akwukwo mara otutu ihe banyere nke a.
M: E nweghị ụdị na-adịghị m mma. Gender bụ naanị a agba igbe oji, pink, odo ... ihe di nkpa bu ihe di n’ime ya.
M: Agụrụ m ọtụtụ akwụkwọ n’otu oge. Right now m nọnyeere Oghere, nke ikpeazụ n’ọdụ ụgbọ mmiri Berna González; anthology nke Mayakovsky; Ihe nzuzo nke ọrụ nka, nke Rose-Marie & Rainer Hagen na Ihe nlegharị ahụ ndị voyeur, nke Talese. Ana m akwado ha niile.
M: Ihe mgbagwoju anya. Ọ gbagwojuru anya, ọ bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya. Enwere ndi ode akwukwo di elu nke nwere nkpuru obi kachasi nma malite akwukwo ha n'azu ahia. Onyinye nke onye na-agụ ya nwere buru ibu. Enwere m olileanya ịme oghere n'etiti ha na na akwụkwọ akụkọ m nwekwara ike ime ka ndị mmadụ nwee obi ụtọ. Enwere ike nyere ha aka, dika akwukwo ndi ozo nyeere m aka. Nke ahụ ga-akachasị mma. Nke ahụ bụ ihe kpatara m ji bipụta: akwụkwọ enyerela m nke ukwuu, nke ukwuu, na, ọ bụrụ na m nwere ike imere ndị ọzọ ihe ndị ọzọ dere akwụkwọ meere m, m ga-enwe afọ ojuju na ndụ. N’udo.
M: Ihe nro a dum emeela anyị niile aru, na-enweghị ihe ọzọ, echekwara m na m ga-ede banyere ya n'ọdịnihu. Ma ọ ka ga-ezu ike. Aghọtaghị ihe n'oge anyị ma na nke gị, na nke a, a ka nwere ọtụtụ ihe maka anyị ịtụle ihe merenụ. Iji chọta nkọwa, ụzọ ịnakwere ya.
Mgbanwe mgbanwe dị iche iche kwesịrị irubere isi ihe kpatara, anyị na-arụ ọrụ ahụ. Anyị kwesịrị ihe a niile idozi. Ozugbo m mechara nke a, ejiri m n'aka na art ga-anwa ịkọwa ya. Na-eme mgbe niile. Nke ahụ bụ ihe nkà bụ. Enwere m olile anya na m nwere ike inye aka. Na olile anya na ihe ndị a niile ga-agwụ n’oge na-adịghị anya. "N'oge na-adịghị anya" dị ka anyị si tụlee oge, ọ bụghị dị ka nke akụkọ ihe mere eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Marmụ nwoke Marías. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Ikpeazụ Dove